Baradho asal ah, ukun, hilib doofaar iyo chives chives. Aad u fiican. | Xeerarka ThermoRecipes
Salad baradhada leh ukunta, hilib doofaar iyo chives
Cuntada cuntadaDaqiiqado 90Dadka 8Kalooriyeyaasha 322
by Ascen Jiménez
Cuntadani maanta waa mid aad u wanaagsan: asal ah salad baradho leh ukumo, hilib doofaar iyo chives. Waxaan kugula talinayaa sida aperitif ama tapas, aad u qabow.
Waxaan ku karin doonaa dhammaan waxyaabaha ku jira Thermomix, sameynta qalabka ugu badan ee aaladdayada jikada. Fiiri fiidiyowga. Waxay qaadataa ilaa seddex daqiiqo waxaadna raaci kartaa dhammaan tillaabooyinka diyaarinteeda.
Maraqa ayaa xambaarsan majones, khalka balsamic iyo isku dar ah udgoon iyo udgoon qalalan oo aad u habeyn karto hadba sida aad uhesho. Basbaas, iniin khardal le'eg, kuum, basil ... isticmaal waxyaabaha aad ugu jeceshahay.
1 Baradho, Beed, Bacon iyo Salad Chive
Baradho, Beed, Bacon iyo Salad Chive
Cunto macaan leh oo aan si gaar ah ugu diyaarin karno annaga oo adeegsaneyna makiinadeena cuntada.
Nooca cuntada: cunto fudud
Waqtiga diyaarinta: 20M
Waqtiga karinta: 1H 10M
Wadarta waqtiga: 1H 30M
500 g oo biyo ah
1 kiilo oo baradho ah diiray oo jarjar xabadaha qiyaastii 2 sentimitir
100g hilib doofaar la jarjaray
3 chives yar yar
1 qaado oo saliid saytuun ah oo bikro ah oo siyaado ah
1 qaado oo ah dhir udgoon iyo / ama geedo udgoon la qalajiyey
Qiyaastii 10 g oo khal khal ah oo Modena ah
Waxaan ku ridnay biyaha dhalada. Waxaan u dhigeynaa dambiilaha meeshiisa oo waxaan dhigeynaa ukunta gudaha. Daboolka ayaanu saarnay.
Waxaan u qaybinaa baradhada inta udhaxeysa saxaarada iyo weelka varoma. Waxaan daboolnaa varoma oo waxaan dhignaa daboolka muraayadda. Waxaan barnaamijka 14 daqiiqo, heerkulka varoma, xawaaraha 1.
Dhamaadka waqtiga barnaamijka, waxaan ka qaadnaa ukunta waxaanan dhex dhignaa baaquli biyo qabow leh.
Daboolka ayaan dib ugu celinay muraayadda iyo varoma oo dhan, iyo baradhada, dushiisa. Waxaan barnaamijka 10 daqiiqo, heerkulka varoma, xawaaraha 1.
Waxaan ka saareynaa varoma booskiisa oo waxaan u oggolaaneynaa baradhada inay ku qaboojiso.
Waan iska mayrinaa oo qallajinnaa muraayadda. Waxaan gelinay hilib doofaar, chives ayaa loo jarjarey xaleef dhuuban iyo saliid saytuun ah gudaha. Waxaan barnaamijka 5 daqiiqo, 120º, leexasho bidix, xawaaraha qaadada.
Waxaan dhigeynaa maraqan ilo weyn ama baaquli.
Waxaan diirnaa ukunta waxaanan u kala jarjaray afar meelood meel. Waxaan ku darnaa ishayada.
Marka baradhada aysan sidaa u kululeyn, waxaan sidoo kale ku ridanaa isha.
Waan dhaqeynaa oo qallaleynaa muraayadda. Waxaan ku dhex galnay majones, dhir udgoon / dhir udgoon iyo khal khal ah. Waxaan barnaamij 3 ilbiriqsi, xawaare 5.
Waxaan si wanaagsan isugu dhafaneynaa maraqayaga inta hartay ee ka kooban maaddooyinka.
Waxaan u oggolaaneynaa salad inuu ku qaboojiyo qaboojiyaha, oo lagu daboolay filim, illaa iyo inta laga shaqeynayo.
Waxaad isticmaali kartaa majones la iibsaday, gaar ahaan haddii aad diyaariso cuntada sida ugu fiican bilaha ugu kulul.
Macluumaad dheeraad ah - Maraqa majones
Xigasho - Vorwerk
Soo ogow cuntooyinka kale: General
Wadada buuxda ee maqaalka: Heerkulbeegyada » General » Salad baradhada leh ukunta, hilib doofaar iyo chives
Waa salad macaan, oo loogu talagalay dadka cuna khudradda, halkii ay ka ahaan lahaayeen baicon, waxay ku darayaan saytuun la jarjaray, oo aad adigu. Waxay doorbidaan wax aad u wanaagsan.
Ku jawaab Marion Aravena
Waa maxay tabaruc wanaagsan, Marion. Mahadsanid 🙂
Jawaab Ascen Jiménez
Jalaatada pecan ee dhaqsaha badan